Cart • Simplr
Kedu eriri m kwesịrị inweta?
Akwụkwọ ikike oge niile
Ụbọchị 30 ga-alaghachi
Mbupu n'efu na US US $ 25 +
Azụmahịa niile 256-bit SSL ezoro ezo maka Nche
Mbupu n'efu na iwu US $ 25 +
Anyị anaghị eziga junk… naanị ọkwa ngwaahịa ọhụụ & ihe mkpali bara uru.
Copyright © 2021 Simplr LLC. Ikike niile echekwabara. Ọnụahịa gosipụtara na US $.
Banyere agba anyị
N'ihi na anyị na-emepụta ngwaahịa nke anyị, site na ihe emere ebe a na US, anyị emela kwesịrị ime ọtụtụ puku eriri igwefoto n'otu oge. Na obere mmepụta na-agba ọsọ, na-abịa nnwere onwe ịnye ọtụtụ agba!
Agba abụghị naanị maka cochọ Mma
O nwekwara ezigbo nzube. Cheta nke a: You're na-agbagharị ihe omume na iji igwefoto igwefoto abụọ - otu ahụ nwere oghere nwere oghere sara mbara, na otu nwere obere telephoto. Tinye a dị iche iche eriri agba na igwefoto ọ bụla ka ịmara ozugbo nke bụ (ọbụlagodi na ọ ka nọ n'akpa gị).
Agba di iche - na oke pere mpe
Iji mee ka ihe dị ọhụrụ, anyị na-achọ ịmegharị agba anyị site n'oge ruo n'oge. Ee, anyị nwere ike ịnwe eriri ịchọrọ na oji… ma eleghị anya, otu ma ọ bụ abụọ ndị ọzọ - mana mgbe anyị rere - anyị na-agakarị emela nwere atụmatụ ọ bụla ị ga-emekwu n'ọdịnihu. Yabụ ọ bụrụ n'ịhụ agba masịrị gị - jidere ya mgbe anyị nwetara ya! (ee, anyi ejirila oji gbacha)
kpochapụwo-editọ-cheta: ochie-nchịkọta akụkọ
Kedu ụdị njikọ nke igwefoto m nwere?
Chọtara na: igwefoto ọ bụla nke nwere triangular ma ọ bụ gburugburu gbawara agbawa; ọtụtụ Fujifilm; nyocha ọkwa Nikon; Leica; Olympus; Sony; ọtụtụ vidiyo nke 35mm; A makwaara dị ka ugwu "gburugburu" ma ọ bụ "mgbanaka".
Chọtara na: ọtụtụ Canon; ntinye- na Nikon n’etiti; Fujifilm X-E4, GFX 50S (jikọọ eriri na obere obere mgbakwunye Fuji), X-T100, XA Series; vinteji Rolleiflex. A makwaara dị ka ugwu "slotted" ma ọ bụ "akụkụ anọ".
Imirikiti iwu na-ebubata n'ime ụbọchị azụmahịa 1-3 site na omumuihe anyị na New Jersey, USA (koodu zip 07029). You'll ga-enweta nkwenye nkwenye nke mbupu (yana nọmba ọnụọgụ ebe ọ dị) mgbe ngwugwu ngwugwu gị. Oge ngabiga niile bụ atụmatụ.
Klas nke mbụ nke USPS (n'efu na iwu US $ 25 +)
Oge 2-3 na-agafe oge; Ndepụta
USPS Prior Prior Mail
Oge 1-3 na-agafe oge; Ndepụta
USPS Mbụ Klas International
6–10 ụbọchị na-agafe agafe; Ndepụta
Ngwa ngwa - 1-3 ụbọchị n'ụzọ oge; Ndepụta zuru ezu
ahịa n'èzí US kwesịrị ịtụle Nwelite COVID-19 a.
Ọnụ ego, ma jiri nwayọ nwayọ mmachi nsuso - Ruo ụbọchị iri anọ na-agafe agafe (na-abụkarị ụbọchị 40-7)
Ngwa ngwa, na zuru ezu nsochi - pụrụ ịdabere na 1-3 ụbọchị n'ụzọ oge
* Simplr anaghị ahụ maka ụtụ isi, ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ndị mba ndị na-abata na US na-ebute.